निती तथा कार्यक्रम माकुराको जोलो जस्तो भयो, न घाम नै छेक्न सक्छ ! न पानी नै ! – Samacharpati
पोखरा, २० जेठ । गण्डकी प्रदेश सभामा आइतबार पेस भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल जारीे छ । मंगलबारको छलफलमा भाग लिदै प्रदेशसभा सदस्य ओमकला गौतमले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको निती तथा कार्यक्रमलाई माकुराको जालोको संज्ञा दिनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो – यो झ्याप्प हेर्दा पुरा ढाँकेको जस्तो न घाम नै छेक्न सक्छ न पानी नै । न त यसले रोगलाई नै नियन्त्रण गर्न सकछ, न त यसले भोको पेट नै भर्न सक्छ ।
उहाँले आफुहरुले गाईलाई घाँस र बाघलाई मासु नै दिन भनेको बताउदै रोगीलाई उपचार र भोको पेटलाई खाना दिनै भनेको हो, नत हामीले गाईलाई मासु भनेका छौ, न त बाघ लाई घाँसै दिन भनेका छौ भन्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशले ल्याएको निती थता कार्यक्रम जनताको भावना, चाहाना इच्छा र वर्तमान परिस्थितिको आवश्यकता विपरीत रहेको उल्लेख गर्नुभयो । साथै उहाँले यो निती तथा कार्यक्रम ल्याउन मात्रै त ल्याईएको होइन भनेर प्रश्न उठेको बताउनुभयो ।
गौतमले यो महामारी र संकटको बेलामा ११ वटा गाडी खरिद गर्ने निणर्य भएको भन्दै ११ वटा गाडी किन्नुभन्दा १६ वटा पिसिआर मेसीन किनेर जनताको कोरोनाको परिक्षण गर्नतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सरकारले कोरोनाको उपचार र नियन्त्रणका बारेमा ठोश निती के ल्यायो, तयारी के गर्यो भनेर प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – सरकारले कोरोनाको उपचार र नियन्त्रणका बारेमा ठोस निती के ल्यायो ? सरकारले तयारी नै खै के गर्यो ? खाली भगवानलई सम्झेर हुन्छ ?
प्रत्येक जिल्लामा एउटा कोरोना हस्पिटलको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, आइसोलेसन र व्यवस्थित क्वारेन्टाईन नभएको र समयामा कोरोनाको परिक्षण समयमा नभएको लगायतका समस्या रहेको गौतमले बताउनुभयो ।
जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री नाकासोनेको निधन
अन्नपूर्ण गाउँपालिका छोम्रोङमा सेञ्चुरी ल्होसार मेला सुरु